တရုတ်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်း LED ဆိုင်းဘုတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ |AVOE
LED ဆိုင်းဘုတ်သည် ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၏ အဓိက ပန်းတိုင်နှစ်ခုတွင် အောင်မြင်ရန် ကူညီပေးသည်-
1. ၎င်းတို့၏ ဆီဆိုင်ကို ရွေးချယ်ရန် လမ်းမှ ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်ပါ။
2. ထပ်လောင်းရောင်းချမှုအတွက် စတိုးဆိုင်ထဲသို့ ဂက်စ်ပန့်မှ မီးပွိုင့်ကို မောင်းနှင်ပါ။
ရွေးချယ်ရန် LED ဆိုင်းဘုတ်များစွာရှိသည်။သင်သည် အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင် ရောက်နေသည်ဖြစ်စေ ပြည်နယ်တွင်းမှ အလွယ်တကူ မြင်တွေ့လိုသည်ဖြစ်စေ AVOE LED Display များသည် သင်၏မြင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသူများ၊ ပန့်တက်များနှင့် အထွေထွေ မက်ဆေ့ချ်ဘုတ်များရှိသည်။
လက်ကားဆိုင်းဘုတ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအား တိကျသောစျေးနှုန်းဖြင့် အလွယ်တကူ အပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ဤဆိုင်းဘုတ်အမျိုးအစားများသည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသောကြောင့် လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများကို ချက်ချင်းပြောင်းလဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။အထူးကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ဆိုင်းဘုတ်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အလားတူပြသနိုင်မည်ဖြစ်ရာ အလားအလာရှိသော သုံးစွဲသူအပေါ် ကြာရှည်စွာ စွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါသည်။ဤ LED ဆိုင်းဘုတ်များသည် အရွယ်အစား အများအပြားရှိသည်။
LED ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းဆိုင်းဘုတ်ကို နေ့ရောညပါ မြင်ရသည်။
သင်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။
LED ဆိုင်းဘုတ်များသည် ခေတ်မီသည်။
ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်း LED ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ဂတ်စ်အီလက်ထရွန်းနစ်စျေးနှုန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ဆိုင်းဘုတ်များ
အမှန်တကယ် သာလွန်သော ဂဏန်းများ ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်း ပြောင်းလဲခြင်း ဖြေရှင်းချက်
လိုက်ဖက်ညီမှုမရှိသော တောက်ပမှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမှ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအထိ၊ AVOE သည် အကောင်းဆုံးဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းဆိုင်းဘုတ်များကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားသည်။
နည်းပညာအသစ်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများသည် ရိုးရာနီယွန်မီးများထက် ပိုမိုတောက်ပပြီး ပိုရှည်သည်ဟု မဆိုသာဘဲ ထိန်းသိမ်းထားရန် စျေးသက်သာပြီး စျေးသက်သာသောကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းကို မိုင်အကွာအဝေး၊ နေ့ရောညပါ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ဝယ်ယူသူများသည် သင့်စျေးနှုန်းသည် ခေတ်မီပြီး ကြည့်ရှုရလွယ်ကူကြောင်း စိတ်ချနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေကြောင်း စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
AVOE တွင် သင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို လုံးဝစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် သင့်လျော်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများရှိသည်။အရွယ်အစားမှ အရောင်တစ်ခုအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိတ်ကြိုက် LED နောက်ခံမီးဆိုင်းဘုတ်များကို ဖန်တီးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် ဒီဇိုင်နာများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများမှ လိုအပ်သောလူအားလုံးကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ သင့်တွင် ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိနေပြီ သို့မဟုတ် သင့်အတွက် ဖန်တီးနေသည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ခြေလှမ်းကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။
အောက်တွင်ကြည့်ပါ- သင့်တစ်ဦးချင်းစီလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အရောင်များ၊ ရွေးချယ်မှုများနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်ထားပါသည်။
· အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများ
· အရွယ်အစားအားလုံးကို အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် Stock ရှိပါသည်။
· ထုတ်လုပ်သူထံမှ တိုက်ရိုက်စျေးနှုန်း။
· ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ယူနစ် 8 ခုအထိ ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
· Controller box တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ Daisy-ကွင်းဆက် 8 ယူနစ်အထိ
· လျင်မြန်သောပါဝါနှင့် အချက်ပြချိတ်ဆက်မှုဖြင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။
ဓါတ်ဆီစျေး LED ဆိုင်းဘုတ် / ဓာတ်ဆီဆိုင် ဆိုင်းဘုတ် / ဓာတ်ဆီဆိုင် LED စျေးနှုန်းပြသ / ဓာတ်ဆီဆိုင် LED ဆိုင်းဘုတ်များ
ကုသိုလ်ကံ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
အရောင်- အနီရောင်၊ ပယင်း၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊ အဖြူရောင်
ဂဏန်းအမြင့်- ၆``၊ ၈´´၊ ၁၀´´၊ ၁၂´´၊၁၅´´၊၁၈´´၊၂၀´´၊၂၂´´၊၃၂´´၊၃၆´´၊၄၀´´၊၄၈´´၊၆၀´ '၆၄'၊ ၇၂'၊စသည်တို့
ဂဏန်းဒီဇိုင်း- အပိုင်း ၇ ပိုင်း မော်ဂျူးများကို ကော်ဖြင့် တံဆိပ်ခတ်ထားပြီး IP65 ရေစိုခံအဆင့်သို့ ရောက်ရှိသည်။
LED မီးများကို အချိန်တိုင်း ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်စေသော ဖုန်မှုန့်အရိပ်။
တောက်ပမှု ထိန်းချုပ်ရေး- အလင်းအာရုံခံကိရိယာဖြင့် အလိုအလျောက်မှိန်မှိန်
Display Dimming- အလိုအလျောက်ပြင်းထန်မှု ချိန်ညှိမှု အဆင့်5ကျော်
မြင်ကွင်း- အလျားလိုက်- 60°-120°၊ ဒေါင်လိုက်- 60°-120° သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်
ဝန်ဆောင်မှုဝင်ရောက်ခွင့်- ရှေ့ သို့မဟုတ် နောက်ဖွင့်ပါ။
သခင်/ကျွန်- တစ်ဖက်သတ် သို့မဟုတ် နှစ်ချက်၊ သခင်/ကျွန်များ ရနိုင်သည်။
Cabinet ပစ္စည်း- သံဗီရို သို့မဟုတ် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ဘောင်
ရေစိုခံအဆင့်- အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဘောင်ဖြင့် IP53၊ သံဗီရိုဖြင့် IP65
ပါဝါထည့်သွင်းမှု- AC/110/220V၊ 50-60Hz
PC ဆက်သွယ်ရေး- ကေဘယ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့ RS232/485;LAN(TCP/IP)၊ ဖောက်သည်ရွေးချယ်နိုင်သည်
ဆက်သွယ်ရေးအကွာအဝေး- RS232 အတွက် Max.15 မီတာ၊ RS485/422 အတွက် 1200 မီတာ
အဝေးထိန်းစနစ် အမျိုးအစား- RF အဝေးထိန်းခလုတ် (ပုံမှန်6ခလုတ် သို့မဟုတ် LCD အဝေးထိန်းကိရိယာ)
LEDs များ၏သက်တမ်း- နာရီ > 100,000
တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်း- တွဲလောင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်း
ပြသမှုပုံစံ- 8.88၊ 8.888၊8.888၊ 8.88 9/10၊ 88.88၊ 88.888 စသဖြင့်
Gas Price LED Sign Control စနစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းဖြေရှင်းချက်များကို လွန်ကဲစံနှုန်းများဖြင့် အင်ဂျင်နီယာချုပ်လုပ်ထားပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း၏ အကြမ်းဆုံး၊ အရှင်းဆုံးသော ဂဏန်းစျေးနှုန်းသင်္ကေတများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Standard LED များကို အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်ဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
တောင်းဆိုချက်အရ LED မီးများကို အပြာနှင့် အဖြူဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
ငွေသား/ခရက်ဒစ် ဂဏန်းများ ဖြေရှင်းချက်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။
မြို့တော်စည်းမျဉ်းအများအပြားတွင် ဓာတ်ဆီဆိုင်များသည် LED ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၏ ဈေးနှုန်းဆိုင်းဘုတ်များကို အသုံးပြုခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားသည်။အခြားလက်လီရောင်းချသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပြင်ပစျေးနှုန်းလက္ခဏာများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော၊ ချွေတာသောဖြေရှင်းနည်းများကို ရှာဖွေကြသည်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်း၏ တစ်ခုတည်းသော စစ်မှန်သော အီလက်ထရွန်းနစ် လှိမ့်ခြင်းဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။
စံအရောင်များ အနက်ရောင်တွင် အဖြူ၊ အနီရောင်တွင် အဖြူ၊ အစိမ်းပေါ်တွင် အဖြူ၊ အပြာပေါ်တွင် အဖြူရောင်။
သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ကြိုက်အရောင်များကို အသုံးပြုပါ။အော်ဒါမှာယူနိုင်သော အရောင်ရွေးချယ်စရာများ ရနိုင်ပါသည်။
ငွေသား/ခရက်ဒစ် ဂဏန်း လက္ခဏာများ
စက်သုံးဆီ လက်လီရောင်းချသူ အများအပြားသည် ငွေသားဖောက်သည်များကို လျှော့စျေးပေးသည်။ငွေသား/ခရက်ဒစ်ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းလက္ခဏာများသည် သင့်အား ပုံမှန်အချိန်ကာလအတွင်း မတူညီသောစျေးနှုန်းနှစ်ခုကြား အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်စေပါသည်။
LED Pump ထိပ်တန်း လက္ခဏာများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ LED Pump ထိပ်တွင် ဆိုင်းဘုတ်များသည် လောင်စာဆီစျေးနှုန်းများကို ပြသရန် အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
8" ဂဏန်းများ ရရှိနိုင်ပါပြီ။
အနီရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင် LED များဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ယူနစ် 8 ခုအထိ ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Controller box တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ Daisy-ကွင်းဆက် 8 ယူနစ်အထိ
ယခင်- Pharmacy Cross LED Display
နောက်တစ်ခု: Outdoor Full Color Double Sided Taxi Roof LED Display P4
7 Segment Led Gas ဆိုင်းဘုတ်
ဓာတ်ဆီဆိုင် Led ဆိုင်းဘုတ်
Led Diesel ဈေးနှုန်း လက္ခဏာများ
Led Gas ဈေးနှုန်း လက္ခဏာ
Mobile Led ဆိုင်းဘုတ်
Outdoor 8888 Led Gas ဈေးနှုန်း ဆိုင်းဘုတ်
Outdoor Led ဆိုင်းဘုတ်
Led မျက်နှာပြင် ဆိုင်းဘုတ် Outdoor Led Display ၊ Outdoor Led မျက်နှာပြင် LED ရုပ်ထွက် Led Display မျက်နှာပြင်